RIKOODH: Karim Benzema Oo Dhigay Rikoodh Gool-dhalinta Ah Oo Aanu Ronaldo Gaadhin, Soona Qabtay Raul Gonzalez - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRIKOODH: Karim Benzema Oo Dhigay Rikoodh Gool-dhalinta Ah Oo Aanu Ronaldo Gaadhin, Soona Qabtay Raul Gonzalez
April 22, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Karim Benzema ayaa isku qoray buugga taariikhda Real Madrid kaddib labadii gool ee uu xalay ka dhaliyey Cadiz.
Weeraryahanka reer France oo xilli ciyaareed aad u sarreeya qaadanaya ayaa waxa uu goolal ka dhaliyey 35 kooxood oo kala duwan oo horyaalka LaLiga ah, waxaanu sidaas ku barbarreeyey rikoodhkii halyeygii Real Madrid ee Raul ee dhinaca gool-dhalinta, kaas oo uu awoodi waayey Cristiano Ronaldo in uu gaadho waqtigii uu Santiago Bernabeu ka ciyaarayay.
Karim Benzema ayaa sidoo kale goolal dhaliyey sagaalkii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka LaLiga, kuwaas oo uu shabaqa taabsiiyey ciyaar walba ugu yaraan hal gool, halka uu muddadaasna saxeexday 11 gool.
Goolasha uu dhaliyey Benzema, waxay Real Madrid ka caawiyeen in aan laga badinin 12 ciyaarood oo xidhiidh ah oo horyaalka ah, taas oo ugu dambayntii keentay in ay qabtaan hoggaanka horyaalka waqti uu xilli ciyaareedkuna sii dhamaanayo.
Karim Benzema waxa uu xilli ciyaareedkan si weyn iskugu muujiyey fagaareyaasha waaweyn iyo kulamada waaweyn ee ay kooxdiisu u baahan tahay.
Kulankii Barcelona ay ku garaaceen toddobaadkii hore ayuu gool-dhalinta ku aftaxay cidhib iyo ciyaartii Madrid derby ee Atletico Madrid oo uu saxeexay goolka barbarraha.
Benzema ayaa hadda abaal-marinta Pichichi ee gool-dhalinta horyaalka Spain waxa uu kula tartamayaa Lionel Messi oo laba gool oo kaliya uu ka dambeeyo, halka kooxdiisuna ay hoggaanka qabatay waqti kulamo kooban hadhsan yihiin.
Inkasta oo Barcelona iyo Atletico Madrid kulamo baaqi u yihiin oo ay dhaafi doonaan Real Madrid haddii ay badiyaan, haddana Los Blancos ayaa wax weyn u aragta in waqtigan ay hoggaanka qabtaan, iyagoo booskaas kusii fadhiyi doonta haddii ay labada kooxood ee kale dhibco lumiyaan kulamadooda toddobaadkan.